May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ (၄၀)
ဆရာမ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓာတ်မကျတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ စိတ်ကျလျင် လူပါ ကျတက်သည်။
စိတ်မောလိုက်တာ ဆရာမ ရယ်..။။
I can read this post until it finishes because I've already known you are now in US. If not, I can't read it. Very terrible experience in life! I am so sad for you and your family.
Sayar Ma, it shall pass too.
စောင့်ဖတ်ရတာ တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ဆရာမရေးတဲ့ Fiction တွေကို သိပ်မဖတ်ခဲ့ဘူးပါ။ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုအနည်းငယ်ကလွဲရင်ပေါ့။ အဲဒီစိတ်ကူးယဉ် fiction တွေထက် အခုရေးနေတဲ့ အဖြစ်မှန်မှန်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု စာစုမျိုးကို ပိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ အခုလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်း ကိုယ့်ဖာသာပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးချလိုက်တော့ မကောင်းပြောချင်သူ၊ တလွဲရေးချင်သူတွေလဲ ရေးစရာမရှိဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ မြန်မြန်ဆက်ရေးဖြစ်အောင် ရေးပါ ဆရာမ။
ထိုထိုသော အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာ အတွက် လေးစားမိပါတယ်။ ဆက်လက်၍ အစစ အဆင်ပြေ ငြိမ်းချမ်းမှုများသာ ကြုံတွေ့ပါစေ။
ကြုံရဆုံရ ဘုံဘဝ ပေါ့ ဆရာမရယ်၊ ပီးသွားပီလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ၊ ဒီထက်တော့ ဘယ်တော့မှ မဆိုးတော့ပါဘူး၊
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆရာမကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီး လေးတွေ အုပ်စုအကြောင်းတွေးနေမိတယ်၊ ဆရာမ ဘဝ
မှာ။ ဆရာမတို့လို စာရေးတတ်တဲ့လူတွေက ရေးပြတော့မှ
သာ ကျွန်တော်တို့က ဖတ်ရပီးတော့ ဪ...ဒို့နိုင်ငံသား
တွေဘဝက ကျွန်သာသာပဲ ရှိတော့ပါလားလို့....
ဆရာမရေ ဖတ်ပြီး စိတ်မောရတယ်။ ကလေးတွေ ကို သနားလိုက်တာ။ အဲ့ဒီလို ဒုက္ခတွေ များခဲ့လို့ တော်ရုံဆို ခံနိုင်ရည်ရှိသွားမှာပါ။ ဘ၀ဆိုတာြုကမ်းတမ်းတယ် လို့တောင် ပြောရင် ရမယ်နော်။ ၄၁ ကိုမျှော်နေပါတယ်။
အမရေ အဖြစ်အပျက်တွေက ရုပ်ရှင်ထက်တောင် ဇာတ်နာသေးတယ်။ ကလေးတွေတော့ဒီအဖြစ်ကို မေ့လို့ရမယ်မထင်ဘူးနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်လာနိုင်တာပဲ တော်လှပြီ။
I proud about Myanmar families.
ဆရာမ.....သမီးသာဆိုရင် ဆရာမလို ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်မထင်ဘူး.....လေးစားပါတယ်.......
ဆရာမရေ... စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။
အပိုင်း ၄၀ မှာ တိုက်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့် မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွားနိုင်တဲ့ ဆရာမတို့ မိသားစုအားလုံးကို ချီးကျူးပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုလေး အတူတကွရှိနေနိုင်တာကိုပဲ...။
မျက်ရည်တွေတွေကျပြီး ဖတ်နေရတာပါ ဆရာမရယ်။
မ ရေ… ဒီအပိုင်းဖတ်ရင်း ကျွန်မရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်တွေလဲ အောင့်လာတယ်…
ပြီးတော့ငိုမိတယ် မ ရယ်… မ ရဲ့ မွန်းကြပ်မှု၊ မိခင်တယောက်ရဲ့ ယူကျုံးမရဖြစ်မှုတွေက ကျွန်မနှလုံးသားဆီပါ ကူးစက်ခံစားရတယ်… ရင်ထဲမှာ နာကျင်လိုက်တာ…